Mebere, June 13-17, 2022
Debanye aha tupu Eprel 15 na https://iwcamembers.org/
Ọnụ ndebanye aha: $400
Enyemaka nwere oke dị - ngwa ga-abụ Eprel 15
Debanye aha site na https://iwcamembers.org/. Họrọ 2022 Summer Institute. Achọrọ ịbụ onye otu na IWCA.
Enwere ike ịchịkọta ụlọ ọrụ Summerlọ Ọrụ Summer IWCA nke afọ a n'okwu anọ: mebere, zuru ụwa ọnụ, mgbanwe, na ịnweta. Sonyere anyị maka ụlọ ọrụ izugbe mebere nke abụọ June 13-17, 2022! Ọdịnala SI bụ oge ndị mmadụ ga-esi n'ọrụ ha na-eme kwa ụbọchị na-ezukọta dị ka ndị otu, na ebe oke ị ga-esi pụọ n'ihe gbasara nkịtị dịịrị gị, ndị otu afọ a ga-enweta ohere. ọ fọrọ nke nta ka ị jikọọ na ndị ọkachamara n'etiti ide ihe n'ofe ụwa. Maka ụdị mbipụta, pịa ya Nkọwa 2022 SI. Dị ka ọ dị n'afọ gara aga, ndị sonyere nwere ike ịdabere na ahụmịhe ahụ ka ha tinye ngwakọta mmesapụ aka nke:
Oge oru ngo nke onwe
Nduzi otu onye na obere otu
Ijikọ ndị otu otu
Ihe omume ndị ọzọ na-etinye aka
Nhazi kwa ụbọchị site na Oge Oge
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere ihe ndị na-ahazi na ndị isi nnọkọ zubere maka gị, biko lelee usoro nhazi oge a, nke na-enye ngagharị nke ụbọchị, oge elekere. Maka ọdịmma gị, a haziri ha maka oge 4 dị iche iche. Ọ bụrụ na ewetaghị nke gị ebe a, biko kpọtụrụ ndị na-ahazi, ndị ga-enye gị otu akọwapụtara na ọnọdụ gị.
Oge Ọwụwa Anyanwụ
A ga-enwe ogbako niile site na ntanetị mmekọrịta, nkwanye ndụ na mmepe ọkachamara yana ihe ndị ọzọ ga-adị n'otu n'otu. N'ihi ọnụ ala dị ala nke ịnabata SI fọrọ nke nta ka ọ bụrụ, ndebanye aha bụ naanị $400 (nke a na-edebanye aha bụ $900). Naanị ndebanye aha 40 ka a ga-anabata. Anyị ga-amalite ndepụta nchere mgbe ndebanye aha 40 gachara.
nkwụghachi iwu: Nkwụghachi zuru ezu ga-adị ruo ụbọchị 30 tupu ihe omume (Mee 13), na ọkara nkwụghachi ga-adị ruo 15 ụbọchị tupu ihe omume (May 29). Enweghị nkwụghachi ga-adị mgbe oge ahụ gasịrị.
Biko zitere Joseph Cheatle email na jcheatle@iastate.edu na/ma ọ bụ Genie Giaimo na ggiaimo@middlebury.edu ya na ajuju.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịdebanye aha ma ị kabeghị onye otu, debanye aha maka akaụntụ ndị otu IWCA na https://iwcamembers.org/, wee họrọ 2022 Summer Institute.
Ndị otu oche:
Joseph Cheatle (ya / ya / ya) bụ onye isi nke Writing and Media Center na Mahadum steeti Iowa na Ames, Iowa. Ọ bụbu onye na-ahụ maka mmekọrịta nke The Writing Center na Mahadum Michigan State wee rụọ ọrụ dị ka onye ndụmọdụ ọkachamara na Case Western Reserve University na onye ndụmọdụ ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Miami. Ọrụ nyocha ya ugbu a na-elekwasị anya na akwụkwọ na nyocha na ebe ederede; karịsịa, ọ nwere mmasị imeziwanye irè nke omume akwụkwọ anyị ugbu a iji kwuo okwu nke ọma na ndị na-ege ntị ka ukwuu. Ọ bụ akụkụ nke otu ndị nyocha na-eleba anya n'akwụkwọ ndekọ ederede nke natara International Writing Centers Association Outstanding Research Award. E bipụtara ya na omume, WLN, Na Akwụkwọ akụkọ nchịkọta akụkọ, kairo, The Ederede Center Journal, Na Akwụkwọ akụkọ nke mmepe ụmụ akwụkwọ kọleji. Dị ka onye nchịkwa, ọ nwere mmasị na otu esi enye ohere mmepe ọkachamara maka ndị ọrụ na ndị ndụmọdụ n'ụdị nyocha, ihe ngosi, na mbipụta. Ọ na-enwekwa mmasị ka ụlọ ọrụ ide ihe na-enye nkwado zuru oke maka ụmụ akwụkwọ site na mmekorita ya na ndị mmekọ ụlọ akwụkwọ na ndụmọdụ akụ. Ọ bụbu onye nnọchi anya At-Large na Board IWCA, onye bụbu onye otu East Central Writing Centers Association Board, na onye bụbu onye isi oche nke IWCA Collaborative @ 4Cs. Ọ bụkwa onye isi oche nke Summer Institute 2021 ya na Kelsey Hixson-Bowles. Ọ gara ụlọ akwụkwọ Summer Institute na 2015 emere na East Lansing, Michigan.
Genie Nicole Giaimo (SI Co-Chair, ha/ya) bụ onye enyemaka Prọfesọ na onye isi ụlọ ọrụ Writing na Middlebury College na Vermont. Nnyocha ha dị ugbu a na-eji ụdị ọnụọgụ na nha dị iche iche zaa ajụjụ dịgasị iche iche gbasara omume na omume dị na ebe a na-ede ihe na gburugburu ya, dị ka àgwà onye nkuzi maka ịdị mma na nlekọta onwe onye, ​​ntinye aka onye nkuzi na akwụkwọ ederede ederede, na nghọta ụmụ akwụkwọ banyere ebe a na-ede ihe. . Ugbu a dabere na Vermont, Genie nwere mmasị igwu mmiri mepere emepe, ịga njem, na ịkwado maka omume ezi omume n'ebe ọrụ agụmakwụkwọ ka elu. Ha anọwo bipụtara in omume, Akwụkwọ akụkọ nyocha ederede, Akwụkwọ akụkọ nchịkọta akụkọ, Ịkụzi Bekee na kọleji afọ abụọ, Nchọcha n'ịmụ akwụkwọ ọgụgụ n'ịntanetị, kairo, N'ofe ịdọ aka ná ntị, Akwụkwọ akụkọ Multimodal Rhetoric, na n'ọtụtụ nchịkọta edezi (Utah State University Press, Parlor Press). Akwụkwọ mbụ ha bụ nchịkọta edeziri Ọdịmma na Nlekọta na Ọrụ Ebe Edemede, oru ngo dijitalụ nweta ohere. Akwụkwọ ha dị ugbu a, Ahụ adịghị mma: Ịchọ ọdịmma na Neoliberal Writing Center na gafere nọ n'okpuru nkwekọrịta na Utah State UP.
Ndị isi ụlọ ọrụ Summer:
Jasmine Kar Tang (ya / ya / ya / ya) nwere mmasị n'ịchọgharị ihe njikọ nke Women of Color feminisms na Writing Center Studies dị ka n'akwụkwọ ndụmọdụ, omume nlekọta, nhazi otu, na obere ọrụ nchịkwa. Ada nke ndị si Hong Kong na Thailand kwabatara, ọ nọ na-atụgharị uche n'ihe gbasara akụkọ ihe mere eme nke otu esi etinye ike agbụrụ n'ahụ ndị Eshia na ebe a na-ede akwụkwọ US. Jasmine na-arụ ọrụ na Mahadum Minnesota-Twin Cities dị ka onye isi ngalaba nke Center for Writing na Minnesota Writing Project na dị ka Mgbakwunye Gụsịrị Akwụkwọ na ngalaba na-agụ akwụkwọ na Rhetorical Studies. Jasmine na-etinyekwa aka n'ọzụzụ ya n'ọrụ ya dị ka ihe nkiri nke Aniccha Arts, imekọ ihe ngosi nka na obodo ejima.
Eric Camarillo (ya / ya / ya) bụ onye isi ụlọ akwụkwọ mmụta na Harrisburg Area Community College ebe ọ na-ahụ maka ule, ọba akwụkwọ, nkwado onye ọrụ, na ọrụ nkuzi maka ụmụ akwụkwọ karịrị 17,000 na ogige ụlọ akwụkwọ ise. Usoro nyocha ya lekwasịrị anya ugbu a na ebe ide ihe na omume kachasị mma n'ime oghere ndị a, mgbochi ịkpa ókè agbụrụ ka ọ na-emetụta omume etiti, yana etu omume ndị a si agbanwe na usoro ịntanetị na-emekọrịta ihe. O bipụtala na Nlebanya ndị ọgbọ, Praxis: Ụlọ Ọrụ Ide Ihe, na Akwụkwọ akụkọ nke Mmemme Nkwado Ọmụmụ. O gosila nyocha ya n'ọtụtụ ogbako gụnyere International Writing Center Association, Mid-Atlantic Writing Center Association, na Nzukọ on College Composition and Communication. Ọ bụ ugbu a Onye isi oche nke National Conference on Peer Tutoring in Writing na onye nchịkọta akụkọ nyocha akwụkwọ maka Akwụkwọ akụkọ nke Writing Center. Ọ bụkwa onye nyocha nke doctoral na Texas Tech University.
Rachel Azima (ya/ha) nọ n'afọ nke iri nke iduzi ebe a na-ede ihe. Ugbu a, ọ na-eje ozi dị ka onye isi ụlọ ọrụ Writing na Prọfesọ na-ahụ maka omume na Mahadum Nebraska-Lincoln. Rachel bụ Onye isi oche Emeritus nke Midwest Writing Centers Association Executive Board na onye nnọchi anya MWCA maka IWCA. Isi nyocha ya na mmasị nkuzi ya bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọkachasị agbụrụ, ikpe ziri ezi na ebe ederede. Ọrụ Rachel apụtala n'oge na-adịbeghị anya na Ederede Center Journal na na-abịa na ma na WCJna omume. Ọrụ nyocha imekọ ihe ọnụ ugbu a na Kelsey Hixson-Bowles na Neil Simpkins bụ onyinye IWCA Research Grant akwadoro ma lekwasị anya na ahụmịhe nke ndị isi agba na ebe ide ihe. Ya na Jasmine Kar Tang, Katie Levin, na Meredith Steck na-arụkọkwa ọrụ na CFP maka nchịkọta edeziri na nlekọta etiti ide ihe.
Violeta Molina-Natera (ya/ya) nwere Ph.D. na Education, MA na Linguistics na Spanish, na ọ bụ ọkà okwu Therapist. Molina-Natera bụ onye mmekọ Prọfesọ, onye nchoputa na onye isi ụlọ ọrụ Writing Center nke Javeriano, yana onye otu Nkwukọrịta Nkwukọrịta na Asụsụ na Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia). Ọ bụ onye nchoputa na onye bụbu onye isi oche nke Latin American Network of Writing Centers and Programs RLCPE, onye so na bọọdụ nke: International Writing Center Association IWCA, na-anọchite anya Latin America, Latin American Association of Writing Studies in Higher Education and Professional Contexts ALES, na Transnational Consortium Nchọpụta Ọdee. Molina-Natera bụkwa onye nchịkọta akụkọ maka ederede na Spanish maka ngalaba Latin America nke International Exchanges na ọmụmụ nke ide nke WAC Clearinghouse, yana onye edemede nke akụkọ na isi akwụkwọ gbasara ebe ịde ihe na mmemme ide.
Ụlọ akwụkwọ okpomọkụ gara aga